Dhacdi naxdin leh: Nin Walaalkiis ku diley Magaalada Dhuusamareeb – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ninka wax dilay oo lagu Magacaabo Faa’id ayaa la sheegay in uu khilaaf soo kala dhex-galay Walaalkiis oo Magaciisa lagu soo gaabiyey Raage,intaasi kaddibna murankooda uu isku bedelay Gacan ka hadal taas oo keentay in mid kamid ah la dilo.
Dad nku sugan Dhuusamareeb ayaa waxaa ay sheegeen in dhacdadaan oo aad looga naxay ay salka ku heyso khilaaf xoogan oo maalmihii la soo dhaafay kala soo dhex-galay labada Nin ee wada dhashay.
Laamaha Amniga Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa la sheegay inay wadaan howlgallo ay ku baadi goobayaan Ninkii walaalkiis dilay,kaas oo la sheegay in qeybo kamid ah Magaalada uu u baxsaday.
Si kastaba dhacdooyinka noocaan oo kale ah ayaa inta badan waxaa ay ka dhacaan deegaannada Miiyoga ah ee Koonfurta iyoBartamaha Soomaaliya, iyada oo aysan jirin cid ilaa iyo hadda loo xukumay in dil noocaas oo kale ah geysatay.